Ingane yenqaba ukudla emini
Ukungabi nesifiso sokudla noma ukulahla okuhleliwe kuyinkinga evame ukuvela ezinganeni ezincane futhi ikhuthaza abazali ukuba baxoxe nodokotela. Ezimweni eziningi, isizathu asiyona yezokwelapha, kodwa ukuziphatha: ingane izama ukuthatha isinyathelo ngenkathi idla (njengokunye kwezinye izindawo zokuphila kwansuku zonke) nokuyala abazali. Izenzo ezinjalo ngokuvamile ziwumphumela wokuqapha ngokweqile ngabazali noma isimo sengqondo sokudla okunomsoco emndenini. Okufanele ukwenze lapho ingane yenqaba ukudla, thola ku-athikili ngesihloko esithi "Ingane ikwenqaba ukudla emini."
Izizathu zokula ukudla
Ngokuvamile, abazali banquma ukuthi ingane idinga ukudla okungakanani, kodwa ingane iyazi izidingo zayo kangcono kunanoma ubani omunye. Izingane zidinga amandla angaphezulu kunabantu abadala (ngokuyisisindo somzimba), kodwa badla kancane. Ukugcwala akuyona neze uphawu lwezempilo. Izingane eziningi ezincane ezinomsoco omzimba ziqinile futhi zinamandla. Izingane ezithandwayo zokuphila ezingenasidingo azifuni ukudla, akudingeki ukuba zigcwalise izimpahla zabo ezinamandla njengamanje njengezingane eziselula. Isisu somntwana asinamandla njengoba isisu somuntu omdala, ngakho-ke sidinga ukudla okuncane. Ezinye izingane zilahlekelwa isifiso sokudla ngoba zigcwele ngokweqile.
Ukudlulisela ukudla kwesinye isikhathi phakathi nosuku noma kwenye indawo kunganciphisa ingane isifiso nesithakazelo ekudleni. I-vagaries yengane ingaba nesimo sengqondo sabazali ngokudla. Abanye abazali, besaba ukuthi ingane ayidli kahle, ilungiselela abanye izitsha esikhundleni sokudliwa izitsha. Lokhu kuphela okukhuthaza ingane ukuba ishiye ukudla kaningi ngethemba lokugcina ukudla okuthandayo.
Emindenini eminingi, izingane zondliwa ngokweqile ukuze ukugcwaliseka kwazo kufakazele ukunakekelwa okungenasisekelo kwabazali babo. Kulesi simo, noma yiziphi izindlela ezivame ukusetshenziswa: ukukholisa nokusongela, imidlalo, iziphazamiso, ukufumbathisa, ukuphoqelela kanye nokudla okuphoqelelwe. Kuzo zonke lezi zimo, izingane ezihlubuki zize zithinte futhi zilalele ngokuzithoba ukudla. Ngezinye izikhathi ukulahlekelwa kwesidlo kuhlotshaniswa nezinkumbulo zezenzakalo ezingathandeki ngesikhathi sokudla. Ngezinye izikhathi izingane ziphoqeleka ukuba zidle uma zingenaso isifiso - ngenxa yokugula, ngoba abathandi ukudla, nje abafuni. Ukukhunjulwa kwezigameko kubangela ingane ukuba inqabe ukudla. Ukungabi nesifiso kungaba yimbangela yokudabuka, ukukhathazeka, ukucindezeleka. Kuyadingeka ukuthi ukhulume nengane bese uthola ukuthi yini ehluphayo.
Ukulahlekelwa yifiso kwengane emini kungenye yezimpawu ezivamile zanoma yisiphi isifo. Izifo ezivame ukuphinda ziqaliswe ezinganeni ezineminyaka engaphansi kwengu-6 zibangela ukwenqaba ukudla. Kodwa lokhu kuyimbangela engavamile yokulahlekelwa kwesifiso ezinganeni.
Siza ingane yakho idle kahle
Okokuqala, kuyadingeka ukusebenzisa indlela ehlukile kwinkqubo yokondla ingane emini. Izingane nabazali kufanele babheke ukudla kwasemini nasekuseni kwasekuseni njengethuba lokukhuluma, bahlangane, bakhulume ukuthi usuku luhambe kanjani. Ngenxa yalokho, ukuhlanganyela ukudla etafuleni elivamile kuyinto ejabulisayo. Ungaphenduli emibono yengane ngokudla ngokucindezela, ukuphikisana noma ukukhamuluka. Ukudla kufanele kube ngumcimbi ovumelanisayo, olula; dumisa ingane uma edla, njengoba kufanele. Qala izingxoxo, funda ukuxoxisana nengane, ngaphandle kwalokho
uzozama ukuthatha isinyathelo ezandleni zakhe. Abazali kufanele banakekele ukudla komntwana. Kodwa akuzona zonke izingane ezidla ngendlela efanayo: umuntu udinga ukudla okungaphezulu, okungenani okuncane. Ungamphoqeleli ukuba adle konke okulele epulatifheni yakhe, kodwa qiniseka ukuthi uzama zonke izitsha ezinikezwayo. Kungcono ukubeka ukudla ezinxenyeni ezincane, futhi uma ingane ifuna okungaphezulu, mbeke izithako. Ungaqhathanisi ingane kanye nabafowabo nodadewabo, kanye nezinye izingane. Manje siyazi ukuthi kungani ingane enqaba ukudla emini.
Amanzi ingane encane
Indlela yokupheka isobho semifino yengane?
Ubisi lwezinyosi izingane
Kungani izingane zivuselela ngemva kokubeletha?
Ukupheka okulula futhi okumnandi ukusekela umkhuhlane wengane yakho
Khipha lokhu ngokushesha: izinto eziphezulu ezingu-4 "eziyingozi" zokugqoka
Ikhalenda lokukhulelwa: amaviki angu-8
Indlela yokwenza iqoqo lama-chocolates ngezandla zakho
Uma indoda ingavumeli ukuthenga izinto ezintsha
Khetha iwayini elifanele
Ukuhlolwa kwe-DNA kwembula indodakazi engekho emthethweni kaVadim Kazachenko
Trendy Wedding Izitayela Zezinwele 2014
Izithelo ezomile - amavithamini emvelo wezempilo
Ubuhlungu besisu ngesikhathi sokukhulelwa kokuqala
Iyiphi indlela yokuphila enempilo?
Amazambane amancane ane-tarragon yombhangqwana
Indaba eyaziwayo ngokuphila kwayo
Izakhiwo eziwusizo zamapulangwe we-millet
I-saladi yenkukhu nge-grapefruit